तपाईले कलेजमा आवेदन गर्नु अघि त्यहाँ धेरै चीजहरू विचारमा हुन्छन्। हामी तपाईंलाई US कालेजहरूमा आवेदन दिनु अघि तलका उपयोगी जानकारी पढ्न सिफारिस गर्दछौं।
युएस कलेजमा आवेदन शुल्क महँगो हुन सक्छ आवेदन शुल्कका कारण। भाग्यवस, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन आवेदकले यी शुल्कहरू छुट गर्न सक्छन्। तपाईको स्वीकृत हुने संभावना बढाउन तपाईले बुझ्नु पर्छ कि कलेज भर्ना अधिकारीहरूले कसरी अनुप्रयोगलाई प्राथमिकता दिन्छन्।
तपाइँको आवेदन पेस गरेपछि तपाइँले के अपेक्षा गर्नुपर्दछ? जब तपाईं आफ्नो परिणामहरूको लागि पर्खंदै हुनुहुन्छ, हामी यहाँ सुझाव दिन्छौं। स्कूलको 'प्रवेश अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्, र उनीहरूको नाम जान्नुहोस्। तिनीहरूले तपाइँको तपाइँको आवेदन स्थिति बारे सूचित गर्न सक्दछन्। तपाईं आफ्नो TOEFL (वा SAT / ACT वा GMAT) स्कोर सुधार गर्न सक्नुहुनेछ यदि त्यहाँ अझै समय छ भने।
तपाईं केही स्कूलहरू द्वारा स्वीकार्य छन्, अझै अन्य द्वारा अस्वीकृत। तपाईका विकल्पहरू के के छन्? सबै स्वीकार्यता र अस्वीकृति पत्रहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्! यी पत्रहरूमा यहाँबाट कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सिकाउने महत्त्वपूर्ण जानकारी समावेश हुन सक्छ।
तपाईं केही स्कूलहरूबाट भर्ना प्रस्तावहरूको बारेमा धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। तर तपाइँ कसरी प्रभावकारी स्कूलहरूको मूल्याate्कन गर्नुपर्दछ, र तपाइँको लागि उत्तम छनौट गर्नुहुन्छ? एक स्कूलको स्थान, लागत, शैक्षिक गुणवत्ता, रैंकिंग, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि सेवाहरू, सुविधाहरू, क्याम्पस सुरक्षा, र जीवनको गुणवत्ता सबै विचार गर्नुपर्छ।
कृपया तलको लिंकमा सन्दर्भ गर्नुहोस् र "मा थप जानकारी पढ्नुहोस्नामांकन भन्दा पहिले 2-3 महिना, ""युएनको लागि तपाईंको प्रस्थान अघि3सम्म7दिन, "र"तपाईंको स्कूलमा आगमन पछि।"